Shiinaha Xilliga jiilaalka anime-hip-hop-ka Harajuku cosplay Sasuke Uchiba 3D daabacday ragga funaanadda Warshadda iyo Warshadda | Caqli badan
Hablaha anime-hip-hop-ka Harajuku cosplay Sasuke Uchiba 3D funaanadda ragga ee daabacan
Farshaxankan 3D -ga ah ee la daabacay waa mid xoog badan si uu ugu sii socdo maaliyada polyester -ka ah. Habayn joogto ah taas oo keenta dabacsanaan iyo raaxo. Qoorta feeraha iyo gacmo -gacmeedyada labiska ah ayaa qabta qaabka moodada ragga, sidoo kale waxay kaa dhigtaa mid gaar kuu ah maalmaha xagaaga. Sublimation-kaan oo daabacan funaanad ayaa ah doorashada wanaagsan oo qabow ee maalmaha la-xiranayo .. Kulanka saaxiibbada, waxqabadyada dibadda, xirashada qoyska xitaa maalmaha shaqada. Qaabka Unisex, jilicsan oo raaxo u leh haweenka iyo ragga, iyo sidoo kale carruurta.
Shaxda Cabbirka Ninka S M L XL 2XL 3XL
Laabta (CM) 49 51 53 55 57 59
Dhererka (CM) 67 69 71 73 75 77
Garabka (CM) 44 45.5 47 48.5 50 51.5
Gacan (CM) 18.9 19.7 20.5 21.3 22.1 22.9
100% polyester, maaliyad keliya
Qoorta Crew oo leh Rib
Hooska feeraha elastane ee suufka iyo cuffs
Hoos -u -dhacay, qaab -dhismeed si loo xoojiyo daboolidda
Hore ayaa loo soo rogay garabka dusha laga tolay
Gacanta laba -cirbadood iyo hems hoose
Taamid joogto ah
Tilmaamaha daryeelka lagu taliyay - mashiinka dhaq qabow leh midabyo la mid ah
Sadarka qallaji ama hoos u qallaji
1. Waa maxay MOQ -gaagu?
Caadi ahaan shaati -gacmeedyada daabacan ee 3D 'MOQ waa 1000pcs/design.
2.Can ma u habayn karnaa daabacaadda buuxda?
Haa, waxaan ku habayn karnaa naqshaddaada AI ama faylka PDF.
2.Mudo intee le'eg ayay tahay waqtiga tusaalaha?
Muunadda hadda jirta, waxay qaadataa 2-3 maalmood. Haddii aad rabto naqshado kuu gaar ah, waxay qaadataa 5-7 maalmood oo ay ku jiraan hannaanka midabaynta midabaynta iyo sidoo kale daabacaadda ama daabacaadda haddii ay jirto. Si kastaba ha ahaatee, waxaan si dhaqso leh uga jawaabi doonaa codsigaaga.
3.Waxa ku saabsan waqtigeenna wax -soo -saarka badan?
Caadi ahaan Waxay qaadan doontaa 30 maalmood MOQ ka dib marka la xaqiijiyo shaybaarka soo-saarka hore. Awoodda wax -soo -saarkeenu waa 200,000pcs bishii.
30% TT lacag bixin horumarsan iyo 70% TT ka hor inta aan la keenin warshadeena. L/C marka la arko qaddar badan dalal gaar ah ayaa la aqbalay.
Samaynta sambal degdeg ah
Kooxda iibinta ee ku hadasha Ingiriisiga iyo adeegga iibinta kadib waxay ka dhigtaa isgaarsiinta mid ku habboon.
Xiga: Ragga Dharka Gacanta Dheer Garbaha La Dhigay Custom Faransiis Terry Tie Dye Crew Neck Sweatshirt
2021 Farshaxanka Cusub Xilliga Cusub ee Kartuunka T-sh ...